SUUQA: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Maanta|10-Juun-2021 | – Garsoore Sports
Asc Aqristeheena sharafta leh kusoo dhowoow Garsoore Sports. Waxaan warbixintan kuugu soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala-iibsiga ay saxaafaddu ka qortay maanta iyadoo ay xusid mudantahay inuu suuqa kala-iibsiga xagaaga uu shalay si rasmi ah u furmay, Kooxuhuna tartan ayay u gelayaan bartilmaameedyadooda.
Kooxda Chelsea ayaa lamid noqotay dalabkii Paris Saint-Germain ee ahaa 56.1 milyan oo ginni oo ay Inter ka gudbisay Achraf Hakimi, sida laga soo xigtay Sky Sport Italia, inkastoo Inter ay ku qiimeyso 22 jirkaan 70 milyan oo ginni.
Barcelona waxay u aragtaa laacibka Manchester City Raheem Sterling inuu yahay beddelka ugu macquulsan ee Ousmane Dembele haddii uu baxo laacibka reer France, sida laga soo xigtay Sport, waxaana Marca ay sheegeysaa in PSG ay xiiseyneyso Dembele.
David de Gea ayaa u muuqda mid doonaya inuu sii dheereysto joogitaankiisa kooxda Manchester United wuxuuna rajeynayaa inuu noqdo dookha koowaad ee goosha kana horreeyo Dean Henderson, The Sun ayaa warinaysa.
Atletico Madrid ayaa diidday dalab 10 milyan oo ginni ah oo United ay ka gudbisay daafaca middig ee England Kieran Trippier, sida laga soo xigtay Football Insider.
Roma ayaa ku dhow inay dhammeystirto saxiixeeda mudada dheer lagu xamanaayay ee Arsenal ee Granit Xhaka, Corriere dello Sport ayaa qortay. West Ham ayaa jeclaan laheyd inay heshiis joogta ah kula soo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Jesse Lingard, sida ay qortay The Sun.
Tottenham ayaa wadahadalo la yeelatay garabka kooxda Borussia Monchengladbach Marcus Thuram, RMC Sport ayaa qortay, The Athletic ayaa sheegaysa in Spurs ay sidoo kale isha ku heyso ciyaaryahanka RB Leipzig Marcel Sabitzer.
Tababarihii hore ee Roma Paulo Fonseca ayaa u muuqda inuu yahay dooqa Spurs ee beddelka Jose Mourinho waxayna dhinacyadu ka wada hadleen heshiis seddex sano ah, sida ay qortay jariirada Guardian.
Tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard ayaa laga yaabaa inuu leyliyo Crystal Palace xilli-cayaareedka soo aadan, Daily Mirror ayaa warinaysa.
Waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogto ilaa dhammaadka, wararka kale ee kusoo kordha suuqa Garsoore.com kala soco.
Ukraine Oo Loo Diidday Inay Xirtaan Funaanaddaha Qaranka Euro 2020 Haddii Aanay Arrintan Sameeyn